Hertha iyo Leipzig waxay duminayaan gidaar si ay u sharfaan isu-imaatinka
ACCUEIL » SPORTS Hertha iyo Leipzig waxay duminayaan gidaar si ay u sharfaan isukeenida
Hertha iyo Leipzig waxay duminayaan gidaar si ay u sharfaan isukeenida
Sabtidii ayaa xustay sannad-guurada 30-deedii ee dhidibkii darbiga Berlin. Sawirka Soeren Stache / sawir isbahaysi ah oo loo maro Getty Images
Munaasabadda sanad-guurada 30-deedii ee dhicitaankeedii, derbigii Berlin ayaa mar kale ku dhacay Olympiastadion, halkaas oo Hertha Berlin ay martigelisay RB Leipzig.
Toddobaadka oo dhan, magaalada Berlin waxay u dabbaaldegtay kacaankii nabdoonaa ee horseeday dib-u-midaynta labadii Jarmal ee 1990. Bannaanbaxyo ayaa lagu qabtay magaalada oo dhan iyada oo laga filaayay mudaaharaadyo waaweyn Sabtidii, oo ay ku jiraan burburin darbiga oo ka dhacay garoonka Olympiastadion ka hor guuldaradii Leipzig Hertha 4-2 kulan ka dhacay Bundesliga.
Soddon sano ka dib dhiciddii darbigii Berlin, Hertha wuxuu ka dhisay darbi qadka dhexe ee dhulkiisa si uu u noqdo astaan ​​qeybinta waddanka seddex sano kahor.
"Zusammen gegen Mauern, zusammen für Berlin" - oo ka soo horjeedda darbiyada, u midoobay Berlin - ayaa ahaa farriinta ku qoran derbiga. Shaashadda weyn, khudbadaha caanka ah ee Madaxweynihii hore ee Mareykanka John F. Kennedy iyo Ronald Reagan ayaa la baahinayay.
"Mr. Gorbachev, dumin derbigaan, ”ayuu yiri Reagan markii taageerayaasha Ostkurve ay u soo bandhigeen koox weyn oo ka mid ah kuwa loo yaqaan 'Brandenburg'. Porte. Xagga sare waxaa ku qornaa: "Darbiyada nagama hor istaagi karaan, Berliners".
Dem ist nichts hinzuzufügen. #WirSindEinBerliner # mauerfall30 #BSCRBL #hahohe pic.twitter.com/4HZizUH8Cv
- Hertha BSC (@HerthaBSC)  Ciyaartoyda Hertha iyo Leipzig waxay ka soo baxeen tunnel-ka a Trabant waxaa sameeyay astaan ​​caan ah oo gawaarida East German ee isla magaca ah, kaasoo darbiga ka talaabay halka ciyaartoygu safka isku taagnaayeen.
gidaarka ayaa markaa loo qaaday codka "geesiyaasha", heesta uu duubay David Bowie ee Hansa Studios ee Berlin ee 1977.
"Qaar badan oo ka mid ah xubnaheena iyo taageerayaasheena ayaa si toos ah u saameeyay dhismaha darbiga, 1961," Madaxa fulinta Hertha Paul Keuter ayaa u sheegay ESPN. Naadi ahaan dhaqan dheer iyo qayb muhiim ah oo ka ah Berlin, daqiiqaddan muhiimka ah ee taariikhda magaaladeennu door muhiim ah ayey noo leeyihiin.
Taariikhda ayaa muujineysa in darbiyada, gaar ahaan kuwa aan maskaxda ku hayno, aysan waligood xal wanaagsan u helin. Taas bedelkeeda, waxay keenaan xanuun iyo xanuun. Halkan Berlin, waxaan ognahay in darbiyada aysan ahayn xalka. "
Hertha waxaa la aasaasay dabayaaqadii qarnigii sagaal iyo tobnaad wixii noqon lahaa bari ka dib Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Kadib waxay dib ugu laabteen dhanka galbeed.
Leipzig, kuwa ay iska soo horjeedaan ilaa maantadan, waa koox kubada cagta ah oo saldhigeedu yahay barigii hore, laakiin waxaa maalgaliya koox weyn oo Austrian ah oo khamri aan cabi karin.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/german-bundesliga/story/3985148/hertha-berlin-and-rb-leipzig-break-down-wall-in-remembrance-of-german-reunification
La wareegida Star Wars ee Tijuana
Qeybta III: Seattle iyo Toronto waxay ku kulmaan cinwaanka MLS
Amazon refait son iPhone 6s et 7 remis à neuf à partir de 145 $ – BGR
Eva Longoria oo ku fadhida rooga gaduudan ee Global Gift Gala oo ku labisan dhar qoorta ka toosan
Hindiya: CERT-In ay digniin u dirtay WhatsApp iyaga oo weydiisanaya macluumaad ku saabsan basaasinta Pegasus: Ravi Shankar Prasad | Wararka Hindiya
Dhageystayaashu waxay leeyihiin ereyga 20 November 2019 - VIDEO
Muuqaalka 'Blanche Bailly' ma wuxuu ku fidin doonaa shabakadaha bulshada?
DADKA & LIFESTYLE7,752
Video dheeraad ah3,575